မက္ကဆီကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က စွန့် ပစ်လေယာဉ် တစ်စင်းပေါ်မှ ဆေးခြောက် ၄၂၉ ကိုလီဂရမ် သိမ်းဆည်းရမိ - Yangon Media Group
မက္ကဆီကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က စွန့် ပစ်လေယာဉ် တစ်စင်းပေါ်မှ ဆေးခြောက် ၄၂၉ ကိုလီဂရမ် သိမ်းဆည်းရမိ
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ ဧပြီ ၁၉
မက္ကဆီကိုအာဏာပိုင်များက နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း Sinaloa ပြည်နယ်၌ ဆေးခြောက် ၄၂၉ ကီလိုဂရမ် တင်ဆောင်ထားသော စွန့် ပစ်လေယာဉ်ငယ်တစ်စင်းကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ရှေ့ နေချုပ်ရုံး(FGR) က ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် စစ်သားများသည် Sinaloa ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတွင် တည်ရှိသော Baturi မြို့နှင့် Playa Colorada မြို့ အကြား ကင်းလှည့်နေစဉ်အတွင်း Angostura ကမ်းခြေတွင် စွန့် ပစ်ထားသော လေယာဉ်တစ်စင်းကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
FGR မှ ထုတ်ပြန်သော ဓာတ်ပုံများအရ ရှုပ်ပွညစ်နွမ်းနေသည့် ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုထဲတွင် လျှို့ ဝှက်ဖောက်လုပ်ထားပုံရသည့် လေယာဉ်ပြေးလမ်းများအနက် ပြေးလမ်းတစ်ခုပေါ်တွင် ရပ်နားထားသော လေယာဉ်ငယ်ကို ရဲအရာရှိများက ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူများသည် ဆေးခြောက် ၄၂၉ ကီလိုဂရမ်ထည့်ထားသည့် အထုတ်ပေါင်း ၄၇ ထုတ်ကို တင်ဆောင်ထားသော စွန့် ပစ်လေယာဉ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း FGR က ဆိုသည်။
မူးယစ်မှောင်ခိုသမားများသည် တောင်ထူထပ်သော “ရွှေတြိဂံဒေသ” ဟု လူသိများသည့် Sinaloa ၊ Chihuahua နှင့် Durango ပြည်နယ်များတွင် လေယာဉ်ငယ်များကို အသုံးပြု၍ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သယ်ဆောင်နေကြကြောင်း မက္ကဆီကိုအာဏာပိုင်များက ယခင်က ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
ယင်းလိပ် လိုက်ကာလုပ်ငန်းက ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဖော်ဆောင်ပေးနေဟုဆို
ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ရေး နိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ်ဆွေရင်းခင်မင်မှုဖြင့် ကူညီမည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် တရုတ်သမ္မတ ရှီပြော
စည်းကမ်း ချိုးဖောက်သည်ဟူသော သတင်းများကို ဒမ်ဘီလီ၏ အေးဂျင့်ငြင်းဆို အပြုအမူများကို ပြောင်??
ထိုင်းအလုပ်ရှင်၏ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုအပေါ် စေလွှတ်ထားသည့်အေဂျင်စီများကို တာဝန်ယူမှုမရှိဟုဆိုကာ ??